Ex-Files ( 2014 ) - Myanmar Asian TV
ကဲ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ၊ အိမ်ထောင်ရှင် မမ ၊ ကိုကိုတွေ ကြည့်သင့်ကြည့်ထိုက်တဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် …
ကားလေးနာမည်က Ex-files ပါ … ဒီကားက 123 ဆိုပြီး ၃ ကား ထွက်ရှိထားပါတယ် …
Ex-Files 1 ( 2014 ) မှာ အဓိက မင်းသားတွေအဖြစ် ၊ တရုတ်ဟာသကား တော်တော်များများမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ မင်းသား Kai Zheng ၊
ကားနာမည် နားထောင်ပြီး ကိုယ်တွေဆယ်ကျော်သက် အတွဲမှန်သမျှကို ရည်းစားနဲ့ပြတ်မယ့်အတွဲများထင်နေလား ဆိုပြီး မအောက်မေ့ပါနဲ့ …
အဲ့လိုမတွေးပါဘူး … ဇာတ်ကားကပေးသွားတဲ့ သင်ခန်းစာလေးကို သဘောကျမိလို့ပါ …
မန်ယန်း လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်လိုက်မင်းသားလေး က အင်မတန်မှ ပွဲရှုပ်သူလေးပါ … သူရှုပ်တယ်ဆိုတာ ပြိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော် … တယောက်ပြတ်ပြီးမှ တယောက်ထားတာ …
အဲလိုအကျိုးဆက်တွေကြောင့် သူ့မှာ Ex တွေများခဲ့ရတယ်ပေါ့ … သူ့ Exတွေကိုပဲပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် သူနေတဲ့မြို့ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က မိန်းကလေးတွေကသူ့ရည်းစားဟောင်းတွေကြီးပါပဲ …
အဲလိုနဲ့ တစ်ရက်သူ့ Exရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကို တက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ် … သူမပျက်မကွက်ကို တက်ရောက်ပေးပါတယ် … မင်္ဂလာခန်းမထဲမှာ ဘယ်စားပွဲက ဘယ်သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့ Tag ပြားလေးတွေရှိတယ်လေ … သူထိုင်တဲ့ပွဲမှာ ယောကျာ်းလေးတွေကြီးပဲ … အဲ့ဒါနဲ့သူလဲTag ပြားလေးကို ကြည့်လိုက်တယ် … Tag name က Ex-boyfriends တဲ့ … အာ့နဲ့ ဟိုဘက်ဝိုင်းကို ကြည့်လိုက်တော့လဲ မိန်းကလေးတွေကြီးဖြစ်နေတယ် … Tag name က Ex-girlfriends တဲ့ …
သတို့သား သတို့သမီးတို့ရဲ့ အသီးသီး EXတွေကိုဖိတ်ထားခဲ့တာပါ … ကိုယ်တောင်ကြည့်ရင်းပြုံးမိသေးတယ် တော်တော် ကဂျောင် ကျတာပဲဆိုပြီး ??? …
အဲ့ပွဲမှာမန်ယန်းက သတို့သားဘက်ရဲ့ ကောလိပ်တုန်းက Crush ခဲ့တဲ့ ရှောင်လူ ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီး ချစ်ကျွမ်းဝင်ရင်း တူတူနေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွယ် …
ဇာတ်ကားကပေးတဲ့သင်ခန်းစာက အဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့မှစတာ …
ရှောင်လူ ရဲ့အစွမ်းပညာပေါ့ … Ex အရမ်းများတဲ့ မန်ယန်း ကို ချစ်သူတော်ထားတဲ့ ရှောင်လူ က မန်ယန်းရဲ့ EX တွေတယောက်ပြီး တယောက်ပေါ်လာတော့ ရှောင်လူ တုံ့ပြန်ပုံလေးကို သဘောကျမိတယ် …
အယ် !!! ဒါပေမယ့် ရှောင်လူ ကရော Ex မရှိဘူးမထင်နဲ့ … သူ့မှာလဲ ကိုရီးယားမင်းသား Exရှိတယ် … မင်းသားကတော့ကိုယ်လဲ နာမည်မသိဘူး … သူပါဖူးတဲ့ကားကတော့ While U were Sleeping ထဲက Lee Jong Suk ရဲ့ အကျင့်ယုတ်တဲ့စီနီယာ ပါ …
မန်ယန်း ကလဲ ရှောင်လူ ရဲ့ EX ကိုတွေ့တော့ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဆံလဲဆိုတာ အရမ်းကြည့်ကောင်းပါတယ် …
ဇာတ်ကား အသွားအလာအရတော့ Ex များတာက မင်းသားဆိုတော့ မိန်းကလေးတယောက် က ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာ ပိုသိရတာပေါ့ …
ဇာတ်ကားလေးကြည့်နေရင်း ကိုယ်တောင်စိတ်ထဲ ” ဪ , မင်းသားကလဲ သူ့အမှားကို ကောင်မလေးအမှားလုပ်နေပြန်ပြီ ” တွေးမိသေးတယ် …
အဲလိုတွေးမိတာလဲ ဇာတ်လမ်းတစ်ကွက်ထဲပါပဲ …
ကျန်တဲ့ဇာတ်ကွက်တွေကတော့ Ex တွေကြားထဲကနေ သူတိူ့နှစ်ယောက်ရဲ့ အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေကို မြင်တွေ့နေရပါတယ် …
မန်ယန်း နဲ့ ရှောင်လူက အတော်ချစ်ကြပါတယ် … ဒါပေမယ့် အခြေအနေတခုကြောင့် အဆုံးသတ်လေးမှာ ရှောင်လူ ကို ရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခု မန်ယန်းကပေးခဲ့ပါတယ် …
Ex လုပ်မလား ? ဆက်တွဲမလား ? ပေါ့ … ရှောင်လူ ရွေးချယ်လိုက်တာက ဘာလဲဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ရင်း စီးမျောလိုက်ပါနော် …
မန်းယန် အဖြစ် Super Junior အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Han Geng က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး
ရှောင်ယူ အဖြစ် မင်းသမီးချောလေး Xingtong Yao က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
Rating အရ IMDb မှာ 5.9/10 ရရှိထားတဲ့ Chinese Movie လေးပါ …
Actors: Han Geng, Ryan Zheng Kai, Yao Xing-Tong, Zhang Hanyu
Openload.co Myanmar878 MB Download Soliddrive.co Myanmar878 MB Download
မောင်နှမတွေတိုင်းမှာ တွေ့တိုင်းစကားနိုင်လုပြီး ရန်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ မောင်နှမတွေရှိတတ်ကြတယ်ဟုတ် ဘယ်လိုပဲမတည့်မတည့် အချိန်တန်တော့ သွေးနီးတတ်တာလည်း ဒီမောင်နှတွေပဲလေ 😁 ခုလည်း ကိုယ့်လို Comdeyကြိုက်တတ်သူတွေအတွက်The Bros ဆိုတဲ့ Korea Comdeyကားလေးကိုညွှန်းပေးချင်လို့ 😁 ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ မြင်ရမှာက Seok Bong နဲ့ Joo Bong ဆိုတဲ့ညီအစ်ကို ၂ယောက် သူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စကားမပြောကြတာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီ…
Trailer: Ex-Files ( 2014 )